हाम्रो समाजमा कहिले आउँला परिवर्तन ? भैंसी गोठ छोएको निहुँमा दलितलाई जरिवाना | Lifemandu
हाम्रो समाजमा कहिले आउँला परिवर्तन ? भैंसी गोठ छोएको निहुँमा दलितलाई जरिवाना
बाजुरा, १० असार । जिल्लाको छेडेदह गाउँपालिका–१ बिराडी गाउँमा भैंसी गोठ छोएको निहुँमा एक दलितलाई दुई हजार रकम जरिवाना तिराइएको छ ।
शुक्रबार दिउँसो नेकपा (एमाले)को प्रचारमा हिँडिरहेका बेला राजेन्द्रबहादुर सिंहको भैंसी गोठ अर्थात छाना छोएकामा प्रेम बहादुर विकले गाली खानुप¥यो । अब देउता मान्नुपर्ने भन्दै विकलाई रु दुई हजार जरिवानासमेत तिराइएको स्थानीय वीरबहादुर रावलले बताए ।
विक नेकपा (एमाले)का वडा अध्यक्षका उम्मेदवार वीरबहादुर रावलसँग प्रचारमा हिँडेका थिए । छानाको बाटो भएर करिव २० मिटर टाढा हिड्दा ‘मेरो छाना किन छोइस् ? अब देउता रिसाउछन् पुज्नु प¥यो’ भनेर गाली गरेका पीडित विकले बताए ।
वडा अध्यक्षका उम्मेदवार रावलले भन्नुभयो, “विकसँग पैसा थिएन, त्यही भएर मैले आफैं पैसा तिरिदिएको हुँ । पैसा नतिरे उनलाई नछोड्ने भए ।”
विकले आफूमाथि भएको जातीय विभेदको घटनाबारे जिल्ला दलित विकास मञ्चमा जानकारी दिएको शङ्कर चदाराले बताउनुभयो । ‘मञ्चले प्रेस विज्ञप्तिमार्फत खेद व्यक्त गर्दै कारबाहीका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाजुरामा उजुरी दिएको छ ।
पानी छोएको निहुँमा वडाध्याक्षले कुटे एक दलित युवा !
पानी छोएको निहुमा दलित युवालाई कुटपिट गर्ने वडाध्यक्षमाथि कारवाहीको माग गर्दै संयुक्त दलित संघर्ष समितिले सर्लाहीका प्रमुख जिल्ला अधिकारलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको छ ।
असोज ११ बुध ग्रहको घर परिवर्तन, यस्ता राशि भएका व्यक्तिलाई फाइदै फाइदा
एजेन्सी । असोज ११ गते बुधबारको मध्यरात १२ः५७ बजे बुध ग्रहले राशि परिवर्तन गर्दै छ । यो पटक यो ग्रह कन्या राशिमा प्रवेश गर्दै छ भने २८ असोजसम्म त्यहाँ रहने छ । त्यसपछि यो ग्रह तुला राशिमा जाने छ । तर य
फेसबुकका मालिक जुकरबर्गको जरुरी सन्देश – फेसबुक प्रोफाइलबाट हटाउनुहोस् यी ११ कुरा
एजेन्सी । अहिलेको समयमा वास्ताव मै भन्ने हो भने सोसल नेटवर्किङ साइट फेसबुक हाम्रो जीवनको अभिन्न अंग बनिसकेको छ । तर यो कहिले काँही हाम्रो लागि समस्याा पनि बन्नसक्छ ।